Administrator | U.N.O.B | Page 3
Smart Phone ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုက အဲဒီလို (Extended Functionalities) အဆုံးမရှိတဲ့ Idea အသစ်တွေ တိုးချင်သလောက် တိုးလာနိုင်အောင် ပို အသုံးတည့်လာအောင် ကြိုးစားလုပ်ထားကြတာ၊ APPS တွေ ဘာမှ ထပ်မတိုး၊ အသုံးမချတတ်ရင် သာမာန်ရိုးရိုး ဖုန်းနဲ့ ဘာထူးတော့မှာလဲ။ ဘာလို့ ငွေ ပိုပေးနေမှာလဲ။ တစ်ချို့ကြတော့လဲ Apps တွေ Download လုပ်ရင် ငွေတွေ တအား ထပ်တောင်းနေမှာပဲ လို့ တွေးပြီး ဘာမှ ထပ် မကလိ တော့တာလဲ ပါမှာပေါ့။ တကယ်တမ်းတော့ Apple ရဲ့ App Store မှာ Free App တွေ အများကြီးပါ။ ငွေပေးရတဲ့ App အများစုကလဲ $1 လောက်ပဲ ပေးရပါတယ်။ Apple ကနေရောင်းတဲ့ App တွေက iPhone နဲ့ iPad ပေါ်မှာရှိတဲ့ App Store ကနေ တစ်ဆင့်ပဲ Download လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Computer ပေါ်ကဆိုရင်တော့ iTune ကနေတစ်ဆင့် Download လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးမှ USB နဲ့ ဖုန်းကိုသွယ်ပြီး Sync လုပ်ရပါတယ်။ အဲဒီ အလေ့အကျင့်လုပ်တာ ပိုကောင်းပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ Computer နဲ့ သွယ်လိုက်တိုင်း iTune က Read More...
Articles, I.T & Knowledge
Paul Freiberger and Michael Swaine တို့ ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်ကို အခြေခံပြီး Apple Computer နဲ့ Microsoft သမိုင်းကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင်ရုပ်ရှင် အဖြစ် ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Apple Inc. CEO, Steve Jobs နဲ့ Microsoft, Chairman Bill Gates တို့ရဲ့ ခြားနားတဲ့ နောက်ခံဘ၀၊ အတွေး အခေါ်အယူအဆ တွေကနေ ဘယ်သူမှ မျှော်မှန်းမထားတဲ့ ကမ္ဘာ့နည်းပညာပြောင်းလဲမှုသမိုင်း ဖြစ်လာခဲ့ရပုံကို ဒီ Video ထဲမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Get the Flash Player to see the wordTube Media Player. Oct 5th 2011 မှာ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ Apple Founder Steve Jobs ဟာ ပညာမယ်မယ်ရရ မရှိပဲ သူငယ်ချင်း တစ်ချို့နဲ့ပေါင်းပြီး 1975 နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်က Apple Computer ကို ကားဂိုဒေါင်ထဲက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမသေခင်လေးမှာပဲ Apple က Exxon Mobile Corp. ကို ကျော်တက်ပြီး Revenue Read More...
Microsoft Chairman Bill Gates , Apple CEO Steve Jobs တို့နှင့် Interview အစီအစဉ်ကို wall Street Journal D5 က ၂၀၀၇ နှစ်က ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အတူလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်လဲဖြစ်ခဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ဖက်လဲ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဘ၀ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ နဲ့ နောင်လာမယ့် အနာဂတ်မှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သူတို့ရဲ့ အမြင်များကို ဆွေးနွေးထားတာဟာ ဗဟုသုတလဲရသလို အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ Blog ကို All Things Digital မှ ရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Video ကို အခြားတစ်နေရာက ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Credit Source: http://allthingsd.com/20070530/d5-gates-jobs-interview/ အောက်မှာ Interview အစအဆုံး ကို All Things D မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။ Soon the great Silicon Valley soap opera will come full circle. Not since Apple CEO Steve Jobs famously interviewed Microsoft Chairman Bill Gates Read More...
Android Phone ထဲမှာ မြန်မာစာ
Android ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစာ ဖတ်လို့ရအောင် ဒီလို လုပ်လို့ရပါတယ်။ ***Android Phone က Rooted လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ရပါမယ်။ (၁) Phone ထဲက Android market မှာ Font Changer ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။ (၂) Phone နဲ့ Computer ကို USB ကြိုးနဲ့ချိပ်ပြီး Phone internal Storage or SD card ထဲက .fontchanger Folder မှာ zawgyi-one.ttf font ကို ထည့်ပါ [Zawgyi Font] ကို ဒီ နေရာမှာပဲ [Download] ယူလို့ရပါတယ်။ (၃) ဖုန်းပေါ်က Font Changer App ကိုဖွင့် Zawgyi One ကို ပြောင်းပြီး Save လုပ်ပါ။ Read More...